Dawo Sawiro’Champions League, Arsenal, Chelsea oo badiyay, Barca oo xasuuqday Roma – SHABAKADA HIIRAAN XOG
HomeWararka SoomaaliaDawo Sawiro’Champions League, Arsenal, Chelsea oo badiyay, Barca oo xasuuqday Roma
Waxaa xalay la ciyaaray kulamadii shanaad ee wareega Group-yada Champions League, iyadoo kooxaha qaar ay rajadooda ku xirneyd inay guul gaaraan, sida Kooxda Arsenal oo rajadeeda guul kaliya aheyd, si aysan wareega Group-yada uga harin.
Kooxda Arsenal ayaa ku dur durisay kooxda Dinamo Zegreb, ciyaar ka dhacday garoonka Emirates, waxaana ay ku badisay 3-0.
Ciyaaryahan Ozil ayaa hogaanka u dhiibay kooxdiisa, waxaana uu ahaa kubad uu madax ku dhaliyay, kadib karoos uu u keenay Sanchez.
Alexis Sanches ayaa gool labaad u dhaliyay Arsenal afar daqiiqo kadib goolkii koowaad, waxaana qeybtii hore ciyarta ku dhamaatay 2-0.
Qeybta labaad ee ciyaarta ayaa Arsenal ay halkeeda ka sii waday kubadii weerarka aheyd, waxaana ay heshay gool saddexaad, kaasoo uu mar kale dhaliyay ciyaaryahan Sanchez.
Kooxda Bayern Munich ayaa 4-0 uga adkaatay kooxda Olympiakos, waxayna guuldarada gaartay Olympiakos ay soo nooleysiisay rajada Arsenal ee ay ugu soo bixi karto wareega 16 ee Champions League.
Arsenal ayaa ciyaarta soo socota la ciyaari doonta Olympiakos, waxayna u baahan tahay goolal badan inay ku badiso, si ay u soo baxdo.
Dhinaca kale kooxda Barcelona ayaa si xun u xasuuqday kooxda Roma ee dalka Talyaaniga, waxaana looga badiyay 6-1, goolasha waxaa kala dhaliyay ciyaaryahan Messi oo muddooyinkan ku maqnaa dhaawac oo labo gool dhaliyay.
Sidoo kale labo gool kale waxaa dhaliyay Suarez, halka labada kalena ay kala dhaliyeen Adriano iyo Pique, waxaana goolka qura ee Roma u dhaliyay Edin Dzeko, inkastoo rigoore uu qasaariyay.
Ciyaaryahan Neymar ayaa waxaa isna laga qabtay qeybtii labaad rigoore, kadib markii goolhayaha Roma Szczesny uu ka raacay kubadda.
Kooxda Chelsea oo waayahan xaalkeeda xumaa ayaa 4-0 uga badisay kooxda Maccabi Tel Aviv oo ka dhisan dalka Israa’iil, waxaana goolasha kala dhaliyay Oscar, Cahill, Willian iyo Zouma.
Ciyaarihii kale ee xalay la ciyaaray waxay natiijadooda ahaayeen sidan:-
BATE Borisov vs Bayer Leverkusen 1 – 1
FC Porto Vs Dynamo Kyiv 0 – 2
Zenit St. Petersburg Vs Valencia 2 – 0
Lyon Vs Gent 1 – 2